Nezvedu - Linyi Mingding International Trade Co., LTD
Hedu makuru zvigadzirwa ndevekushanda michina senge danda debarker, huni peeling muchina, veneer stacker, banga grinder, kumucheto kutema saha, yepakati munyori uye inopisa yekudhinda uye yese yekugadzira mutsara mhinduro nezvimwe Uye isu tiri kubatawo nehuni zvigadzirwa senge plywood, MDF , OSB nezvimwe.
Mumakore aya, takagamuchira kurumbidza kwakawanda kubva kuvatengi vedu. Uku ndiko kukudzwa kwedu kukuru kubatsira vatengi vedu kugadzirisa matambudziko avo.
Nyika zana + dzakatumirwa kunze kwenyika
Makore gumi ekugadzira uye yekutengesa ruzivo
Wepamusoro mutengesi wemachini & zvigadzirwa zvehuni muChina
Chikwata chedu chese chinosanganisira chekutengesa uye chese--sevhisi sevhisi ichachengetedza chishuwo chedu chekuita kuti vatengi vese vagutsikane.Takawana kuvimba kwakanyanya kubva kuvatengi vedu, pavanenge vachisangana nemamwe matambudziko mundima yehuni iyi, zvisinei nemuchina kana zvigadzirwa zvehuni. , vanofara kuwana mazano kana kupa kubva kwatiri. Ichi ndicho chinangwa chedu futi: Kamwe kuva mutengi wedu, tichava shamwari dzakanaka nekusingaperi.
Isu tinoshandisa zvakakwana iyo ISO9001 mhando sisitimu uye zvakanyatso shandisa matatu kuongororwa mukugadzirwa, iko mbishi kuongorora, kuongorora maitiro, uye kuongorora kwefekitori; Seti yega yega yemuchina yatinotakudza kune vatengi vanofanirwa kupasa kuyedzwa kumhanya mufekitori yedu. Chero dambudziko rinofanira kugadziriswa usati warodha. Uyu mutemo wakasimba wakatibatsira kuti mumwe nemumwe mutengi agutsikane nemuchina watakatumira kwavari. Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi uye zvinoenderana nenyika zviyero, uye zvinogadzirwa nemhando dzakasarudzika zvigadzirwa uye tekinoroji yepamusoro kuona kuti chigadzirwa mhando, maratidziro uye kuita zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Tine mamwe masangano munyika dzakasiyana, izvo zvinoita kuti michina yedu uye zvigadzirwa zvive padyo nevatengi vekupedzisira. Izvi zvinovimbisa vashandisi vedu vekupedzisira kuti vawane iyo mushure mekutengesa sevhisi munguva. Hatisi kuzokuramba sezvo iwe uchisarudza isu kuti uve bhizinesi rako bhizinesi. Unoshuvira kufambira mberi mberi newe pamwe chete.